ချစ်ကြည်အေး: ဝိညာဉ်မှတ်တမ်းထဲက ညအိပ်မက်မော
မျက်နှာဖုံးနှင့် အတွင်းသရုပ်ဖော်ပုံများ- သူရိန်ရဲမြင့်
ပါဝင်ရေးသားကြသူများ-ကိုကိုသက်၊ ကိုမျိုး၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ ချိုပိန်းနောင်၊ စစ်ငြိမ်းဒီရေ၊ ဆူးခက်မင်း၊ ညီဇံလှ၊ နှင်းနဲ့မာယာ၊ ပန်ဒိုရာ၊ ဖိုးခွား၊ ဖိုးစိန်၊ မိုးလှိုင်ည၊ မြသွေးနီ၊ မှိုင်း (ဆေး-၂)၊ သူရဿဝါ၊ သက်ဝေ၊ အော်ဂဲနီ၊ အောင်ဖြိုး၊ သြမြိုင်၊ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြည်အေး
ghost record is not for commercial purposes and all rights reserved and remain with the stated artists.
ထွေးတို့ စီးလာခဲ့တဲ့ ဗညားနွဲ့သင်္ဘောကြီးမှာ စက်ရှိန်လျှော့ချလိုက်လေပြီ။ သူ့ခမျာ တစ်ညလုံး ခုတ်လာခဲ့ရတာ မောလှပေရော့မည်။
ပုသိမ်မြို့ မေတ္တာဦး ဆိပ်ခံဗောတံတားကို လှမ်းမြင်နေရပြီမို့ ထွေးရော နေခြည်ပါ စိတ်တွေလန်းလာကာ အလိုလို ပျော်ရွှင်လာမိသည်။ နေခြည်မှာ သူ့အ၀တ်သေတ္တာလေး တကိုင်ကိုင်နဲ့မို့ ကမ်းကပ်ဖို့ လိုသေးကြောင်း၊ အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်၊ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်မှ ကမ်းကပ်နိူင်မှာဖြစ်ကြောင်း တွေးက ပြောပြပြီး နှစ်ယောက်သား သင်္ဘောလက်ရမ်းနားက မခွာနိူင်၊ ကမ်းနားလမ်းတစ်လျှောက်မြင်နေရတဲ့ ရှု့ခင်းတွေဆီကလည်း မျက်လုံး မလွှဲနိူင်ဘဲ ရှိနေရသည်။ တကယ်ဆို ထွေးတို့ နှစ်ယောက်လုံး ပင်ပန်းလှပြီ။ ညက တစ်ညလုံး မအိပ်နိူင်ခဲ့။ နေခြည်က ခရီးထွက်ခဲ့ရလို့ ငယ်ရွယ်သူပီပီ အပျော်လွန်ကာ အိပ်မပျော်၊ ထွေးကတော့ ပုသိမ်မြို့နောက်ခံ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ ပြင်ဆင်ကာ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အိပ်မပျော်နိူင်။
ပုသိမ်မြို့....။ ထွေးအတွက် သတိရစရာအကြောင်းများနှင့် ပြည့်လျှံနေသော မြို့ကလေး။ ဒီမြို့လေးကို နောက်ခံထားကာ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ စဉ်းစားတော့ ထွေးခေါင်းထဲကို အရင်ဆုံးဝင်ရောက်လာတာက မောင်။ မောင့်အကြောင်း တွေးမိ သည်။ မောင့်အကြောင်းတွေးမိတိုင်းလည်း ပြတ်နိူင်ခဲသော သံယောစဉ်အပိုင်းအစများက ထွေးကို ကျီစယ်ကလူပြန်ကာ စိတ်မောလျှက်က ပြုံးမိရမြဲ။ မောင်က ပုသိမ်သား၊ ပုသိမ်မြို့ လွတ်လပ်ရေးကွင်းမှာ စနေနေ့တိုင်း မောင်တို့ ၀ိုင်းကလေး တီးခတ်သီဆိုနေကျ။ တောက်ပသော ကြယ်ကလေးလို့ အမည်ရတဲ့ မောင်တို့တီးဝိုင်းမှာ မောင်က လိဒ်ဂစ်တာ တီးခတ်သူဖြစ်ကာ သီချင်းတွေ ပင်တိုင်သီဆိုသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
တောက်ပသော ကြယ်ကလေးသည် ရန်ကုန်သူ ထွေးနှင့် မောင်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းရဲ့ အစလည်းဖြစ်သလို အဆုံးသတ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ သီချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့ ထွေးအတွက် ပုသိမ်ကိုရောက်ခိုက် သူ့အစ်ကိုတီးဝိုင်းမှာ အပျော် ၀င်ဆိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ မောင့်ညီမ ထွေးသူငယ်ချင်း စုချိုရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ ထွေး စင်ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သီချင်းတိုက်ကြတုန်းက အကောင်း၊ စင်ပေါ်ရောက်မှ နည်းနည်းမြန်သော ဆိုပေါက်အတွက် အတီးသမားတွေက နောက်ကကျားလိုက်သလို လိုက်တီးပေးခဲ့ရတာလို့ မောင် စတော့ ထွေး ရှက်ရွံ့စွာ ပြုံးနေရင်း ရင်ခုန်သံတွေ ကို မောင်မကြားအောင် ထိန်းခဲ့ရသေးသည်။
သဘောင်္ကမ်းကပ်လို့ လူတွေနည်းနည်းစဲသွားမှပဲ ထွေးတို့ ဆင်းခဲ့လေ၏။ လာကြိုမဲ့သူလည်း မရှိတော့ အေးအေးဆေးဆေးပင်။ ဗောတံတားပေါ်ရောက်လို့ ဗညားနွဲ့ကြီးကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ သူက ကမ်းမှခွာကာ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှိတဲ့ ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းဘက်ကို ဦးတည်နေခဲ့ပြီ။ ထွေးတို့လည်း တည်းရမည့်အိမ်ဘက်ကို သေတ္တာ ကိုယ်စီဆွဲရင်း လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ အိမ်က နီနီးလေးပါ။ တစ်ဘက်ကားလမ်းကူးရင်း ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း အထက်ဘက်ကို ၁၅မိနစ်လောက် ဆန်လျှောက်လိုက်ရင်ပဲ ရောက်ပြီ။
တည်းရမည့်အိမ်ရောက်တော့ ရုံးချိန်မို့ ဦးဦးက ရှိမနေပါ။ သို့သော် ဆွေကြိုပြောထားသည့်အတွက် နေရာထိုင်ခင်း စီစဉ်ထားနှင့်သည်။ ဆွေ့ဖေဖေ ဦးဦးက ရုံးကြီးတစ်ရုံးမှာ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်။ ဦးဦးနေတဲ့အိမ်က ရေနံဝနေတဲ့ ဘိုတဲကြီးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ထိုဘိုတဲကြီးနှင့် ရုံးမှာ လမ်းလျှောက်လျှင် ငါးမိနစ်ပင် မကြာသော ၀င်းခြံကျယ်ကြီး တစ်ဝင်းတည်းမှာပင် တည်ရှိကြသည်။ ဘိုတဲနှင့် ရုံးအကြား ဘေးခပ်ကျကျမှာ ထွေးတို့ နေရမည့် ဧည့်သည်ဆောင်ရှိလေသည်။ ဘိုတဲ၊ ရုံးနှင့် ဧည့်သည်ဆောင်တို့ကို အပေါ်မှစီးကြည့်လျှင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ စီပုံသဏ္ဍာန်ကို လေးထောင့်ကျအောင် မျဉ်းဖြောင့်များနှင့် ရေးထားသည့် ပုံ ဖြစ်လေသည်။
ဧည့်သည်ဆောင်မှာ နှစ်ဆောင်ရှိလျှက် ထွေးတို့နေရမည့် အဆောင်ဘေးမှာ မကရင်မတို့မိသားစု နေကြသည်။ မကရင်မဆိုတာက ဦးဦးအတွက် ဝေယျာဝစ္စများလုပ်ကိုင်၊ ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ်ပေးနေသူ ကရင်အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်။ မကရင်မကပဲ ထွေးတို့ကို ခရီးဦးကြို နေရာချထားပေးပြီး နေ့လည်စာချက်ပြုတ်၍ လာပို့ပါမည့်အကြောင်းပြောကာ သူ့အဆောင်လေးဘက် ပြန်သွား၏။ သည်တော့မှ နေခြည်ရော ထွေးပါ တစ်ညလုံးခရီးပန်းလာသမျှ ကိုယ့်ခုတင်လေးပေါ် ခြေဆန့်ခါးဆန့်ကြရသည်။
မှေးကနဲ အိပ်ပျော်မယ်ကြံရုံရှိသေး၊ ဘေးနားမှာ တစ်ယောက်ယောက် လာဝင်အိပ်သလို ခံစားလိုက်ရတာမို့ ထွေးမျက်လုံးတွေ ဖျတ်ကနဲ ပြန်လည်ပွင့်လာကြသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ နေခြည်။ ထွေးခုတင်ပေါ်မှာ လာပြီး ထွေးဘေးနား ပူးကပ်အိပ်နေခြင်းပင်။ ညတုန်းက သင်္ဘောပေါ်မှာ အ်ိပ်မရကြစဉ် " နေ မကြောက်ပါဘူး မမထွေးရဲ့ ပြောပြပါနော်" ဆိုသည့် နေခြည်စကားကို ပြန်လည် ကြားယောင်ကာ ပြုံးလိုက်မိလေသည်။
ထွေးနဲ့ ဆွေတို့နှစ်ယောက်ကို အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဆယ်မီနာတက်ဖို့ ရုံးက လွှတ်တော့ နှစ်ယောက်လုံး ပျော်လိုက်ကြသည် မှာ ပြောတောင်မပြတတ်။ တစ်လလောက်အလိုကတည်းက အိတ်ထဲကို အ၀တ်အစားတွေထည့်၊ စားစရာတွေ ဘာတွေ ယူသွားရကောင်းမလဲ စီစဉ်၊ သွေးဆေးတို့ ရှုဆေးဘူးတို့လည်း ထည့်ရနဲ့ ၂ညအိပ် ၃ရက်ခရီးကိုပင် အကြာကြီးလိုလို လုပ်နေကြလေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားစာတွေက သကြားတွေ ကဲကာ အချိုလွန်သည်ဆိုတာမို့ စားစရာလေးပါ ထည့်သွားကြဖို့ ပြင်ရသည်။ တကယ်တမ်းရောက်သွားတော့ ကျွေးတာတွေပင် မစားနိူင်၊ ထည့်သွားသော ပုဇွန်ခြောက်ကြော်မှာ ဗူးလိုက်ပင်ပြန်ပါလာခဲ့သည်။
ဆယ်မီနာအပြီး မပြန်ခင် နောက်တစ်ရက်မှာ မြို့တွင်းလှည့်လည်ဖို့ အစီအစဉ်ဖြစ်သော်လည်း ဆွေက နေသိတ်မကောင်း လှတာမို့ ထွေးပါ သိတ်မတက်ကြွနိူင်တော့ပါ။ ထိုညက ဆွေ ကိုယ်တွေပူကာ အဖျားကြောင့် အိပ်ယာပေါ် မှိန်းနေချိန် ထွေးကတော့ ရေမိုးချိုးရန် ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လာခဲ့သည်။
ထွေး ရေမိုးချိုးပြီး ပြန်ထွက်လာစဉ်မှာပင် ဆွေ့ဆီက အသံတစ်သံ ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။
"ထွေး နေဦးနေဦး ရေချိုးခန်းထဲ မ၀င်နဲ့ဦး၊ အထဲမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ခေါင်းလျှော်နေတယ်"
"ဟမ်... ဆွေ ဆွေ ဘာပြောတာလဲဟင်၊ ထွေးကဖြင့် ရေတောင် ချိုးပြီးနေပြီ"
"ဟင် ထွေး ဟုတ်လား ဆွေ အိပ်မက် မက်တယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ထွေးရယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာလေ မ်ိန်းမတစ်ယောက် ရေချိုးခန်းထဲမှာ ခေါင်းလျှော်နေသတဲ့၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေက အုပ်ထားလို့ မျက်နှာတော့ သေချာမမြင်လိုက် ရဘူး"
"ဆွေရယ် ဆွေ အဖျားနဲ့မို့ စိတ်က ထင်တာနေမှာပါကွယ် ကဲ ပြန်အိပ်လိုက်ဦးနော်၊ မနက်ဖြန် ရှေးဟောင်းပြတိုက်တို့ ဈေးတို့ကို အဖွဲ့နဲ့အတူ လိုက်ပို့ပေးမှာတဲ့"
ပြောသာ ပြောလိုက်ရသည်။ ထွေးကိုယ်တိုင်ပင် ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လိုက်စဉ်ခဏမှာ ကျောထဲက စိမ့်ကနဲဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတာမို့ လက်ဖျားခြေဖျားများပင် အေးစက်သွားရသည်။ ကြောက်စိတ်နှင့် စောင်ကို ခေါင်းပေါ်ထိ ဆွဲခြုံလိုက်ကာ ဇွတ်မှိတ် အိပ်ခဲ့ရလေသည်။
ထွေးတို့ မနက်စာ စားပြီးကြတော့ ၈နာရီပင် ခွဲတော့မည်။ ချက်အောက်လုပ်အပြီး ကားပေါ်တက်ကြတော့ ထွေးတို့နှစ်ယောက် မှလွဲ၍ အားလုံး ကားပေါ်မှာ ရောက်နေကြပြီ။ ခုံအလွတ်က ဟိုးနောက်ဆုံးတန်းမှာသာ ရှိတော့တာမို့ စောင့်နေကြသူ အားလုံးကို တောင်းပန်ပြုံးလေး ပြုံးပြရင်း ဟိုးနောက်ဆုံးထိ ၀င်ထိုင်ကြရသည်။ ထွေးတို့ ရောက်ပြီး ထိုင်လိုက်စဉ်ခဏမှာပင် ကားကြီးက တရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာလေသည်။ ညက ဆေးသောက်ထား၍ ဆွေနည်းနည်း နေကောင်း လာတာမို့သာ တော်တော့သည်။ လမ်းဘေးက ရှု့ခင်းလေးတွေ ငေးရင်း ၀ယ်ရမည့် အိမ်အပြန်လက်ဆောင် စာရင်းတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း ဈေးဝယ်စာရင်း လုပ်ကြ ရသေးသည်။
ဧည့်လမ်းညွှန် ကောင်မလေးက "ညာဘက်မှာ ကြည့် အဲဒါ သုဿန်" ဆိုလို့ ထွေးတို့နှစ်ယောက်လုံး ညာဘက်ကို ခေါင်းကလေးတွေ ငဲ့ကြည့်မိရသည်။
"လှလိုက်တာ၊ ပန်းခြံကလေးကျနေတာပဲနော်၊ သေချင်စရာလေး" ဆိုတဲ့ ဆွေ့အပြောမှာ ရယ်မောမိကြသေးသည်။
ပြတိုက်ရောက်တော့ အားလုံး ဆင်းကြသည်။ "ဒီမှာ တစ်နာရီ အချိန်ရတယ်။ ကြည့်ပြီးရင် အားလုံး ကားဆီ ပြန်လာ၊ ကိုယ့်နေရာမှာပဲ ကိုယ်ပြန်ထိုင်ကြပါ" ဆိုတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန် ကောင်မလေးကို ခေါင်းညိတ်ပြုံးပြရင်း ထွေးတို့ ကားပေါ်က ဆင်းခဲ့ကြသည်။ ပြတိုက်ထဲမှာ ခေတ်အလိုက် ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ပြောင်းလဲလာပုံကို အဆင့်ဆင့်ပြသထားသည်။ သူတို့နိူင်ငံ ရဲ့ ငွေကြေးသုံးနှုန်းမှု၊ ထုတ်ဝေမှု အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ပြသထားသေးသည်။ ပုံတူပန်းချီကားတွေလည်းပါသည်။ အများကြီးပါပဲ၊ ကြည့်စရာတွေက တစ်နာရီနှင့် ဘယ်လိုမှမလောက်နှိုင်။
ကားပေါ်ပြန်တက်လာကြတော့ ဧည့်လမ်းညွှန် ကောင်မလေးက ကားမထွက်ခင် လူရေတွက်သည်။ ရေတွက်ပြီး "တစ်ယောက်လိုသေးတယ်၊ ကိုယ့်ဘေးကလူ ကိုယ်ကြည့်ကြ၊ ဘယ်သူ မလာသေးဘူးလဲ" မေးရာ အားလုံးက ကိုယ့်ဘေးကလူ ကိုယ်ပြန်စစ်ကာ အကုန်ရှိကြောင်း ပြောတာမို့ ကောင်မလေးက နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရေပြန်သည်။ မကြေမနပ်နှင့် တစ်ယောက် လိုနေသေးတယ်ချည်းပြောကာ သူမက ကားကို ပေး မထွက်တော့ပါ။
ပြီးမှ ထွေးတို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေသော နောက်ဆုံးခုံကိုကြည့်ကာ "နင်တို့ဘေးက တစ်ယောက်ရော ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့လေ" ဆိုတော့မှ ဆွေရော ထွေးပါ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ကြောင်အသွားကာ "ဆံပင်ရှည်ရှည်...နဲ့ ဟုတ်လား" လို့ သံယောင်လိုက်မိတော့သည်။ သူမက ခေါင်းညိတ်ပြရင်း "ဟင့်အင်း နောက်ဆုံးခုံမှာ ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ" ဆိုတဲ့ ထွေးတို့အဖြေကို ဘ၀င်မကျဟန် ပြသည်။ ခဏစောင့်ပြီး ဘယ်သူမှကျန်မနေတာ သေချာမှ ပြတိုက်ရှေ့က ကားထွက် ခဲ့တော့သည်။
သည်တော့မှ ဆွေက ထွေးလက်မောင်းကို ကိုင်လှုပ်ကာ “တွေ့လား မိထွေး ငါမပြောဘူးလား၊ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့တဲ့ ငါညက ရေချိုးခန်းထဲမှာ တွေ့မိတဲ့မိန်းမပဲနေမှာ" လို့ ပြောလိုက်မှပဲ ညကအဖြစ်ကို ပြန်သတိရကာ ဆံပင်တွေ ထောင်ထသွား မတတ် လန့်ကြရသည်။ " အေး ဟုတ်မှာ ခုနက လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သင်္ချိုင်းမှာ ဆင်းနေခဲ့တာများလား မသိဘူးနော်" ထွေးက စကားထောက်ပေးလိုက်ရင်း နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်လက်ဖ၀ါးကို တစ်ယောက်ဆုတ်ကိုင်ကာ ရသမျှဘုရားစာတွေ ရွတ်ရင်း လိုက်ပါခဲ့ကြရတော့သည်။
"ဟင် ကြောက်စရာကြီး၊ သူက ဟိုတယ်ကနေ မမထွေးတို့ ကားပေါ်အထိ ပါလာတာပေါ့နော်"
"အမလေး နေခြည်သာဆို ကားပေါ်မှာတင် အသက်ထွက်သွားမလားပဲ"
"သူက ကိုယ့်ကို ဘာအန္တာရာယ်မှမှ မလုပ်တာပဲ နေခြည်ရယ်"
"ဟမ် ဘာပြောပြော နေခြည်တော့ ကြောက်တယ်၊ ဟိုတယ်တွေမှာ မနေရဲတော့ဘူး၊ ပုသိမ်ရောက်ရင် ဟိုတယ်မှာ မနေဘဲ မမဆွေတို့အဖေအိမ်မှာ နေဖို့ မမထွေးစီစဉ်တာ မှန်တယ်။ ဟီးဟီး နေခြည်တော့ ကြိုက်တယ်။ ပိုပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ရှိတာပေါ့ နော် မမထွေး"
"ဟင် ခုနကတော့ နေ မကြောက်ပါဘူး မမထွေးရဲ့ ပြောပြပါ ဆို"
"ဟီး ကြောက်ပါဘူး၊ နည်းနည်း သွေးလန့်သွားတာ"
"အေးပါ အေးပါ ဟုတ်ပါပြီ နေခြည်မရဲ့ ကဲ အိပ်ပါတော့ မနက် ၁နာရီတောင် ကျော်နေပြီ"
ပြောသာ ပြောရသည်၊ ထွေးလည်း အိပ်ပျော်နိူင်တော့မည် မထင်ပါ။ ဗညားနွဲ့ကြီးကတော့ တအိအိ ခုတ်မောင်းရင်း သူ့တာဝန် သူကျေနေသည်။ ထွေးမှာဖြင့် ၀ရန်တာဘက်ထွက်ကာ ကြယ်ကလေးများဆီ ငေးကြည့်ရင်း ကောင်းကင်မျက်နှာပေါ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖွေရှာနေခဲ့ပါသည်။
ညနေ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်တော့ ဦးဦးက ထွေးတို့ အဆောင်လေးဆီ လာနှုတ်ဆက်သည်။ ထွေးက ဆွေပါးလိုက်သော ရန်ကုန်စာများနှင့် စာလေးတစ်စောင်ကို ထုတ်ပေးရင်း နေစရာ၊ စားစရာ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဦးဦးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောရသည်။ “စက်ဘီးစီးတတ်ရင် မကရင်မကို စက်ဘီးတစ်စီး ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်၊ ဘယ်သွား ချင်သေးလဲ ပြော နောက်နေ့တွေ ဦးဦးလိုက်ပို့ပေးမယ်” ဆိုလာတော့ လူကြီးကို အပူမကပ်ချင်တာက တစ်ကြောင်း၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာချင်တာက တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် အားနာနာနှင့်ပင် ငြင်းရသည်။ နောက်ရက်များမှာတော့ မကရင်မ သားလေး စိုးစိုးက ထွေးတို့ သွားချင်သည့်နေရာများကို လိုက်ပို့ပေးရှာပါသည်။
ဆွေ့အဖေ ဦးဦးသည် ဆွေနှင့် မျက်နှာပေါက် တူသည်။ နှာတံပိုမိုပေါ်လွင်ကာ နှုတ်ခမ်းများ ပိရိသော၊ ငယ်စဉ်က လူချောတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့မည်မှာ သေချာသော ရုပ်ရည်ရှိသည်။ ၅၈နှစ်ဆိုသော အသက်အရွယ်မှာ ကျန်းမာသော အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် ကြီးပြီဟု မဆိုသာ။ ဆွေ့မေမေဆုံးသွားပြီးကတည်းက နောက်အိမ်ထောင်မထူခဲ့သော ဦးဦးမှာ ဆွေတို့မောင်နှမတွေအတွက် ဖခင်ဆိုတာထက် ပိုမိုသာလွန်သော သူရဲကောင်းတစ်ဦးနှင့်ပင် တူနေသေးတော့သည်။
ထွေးတို့ ရောက်တာ လေး-ငါးရက် ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ဦးဦးနေထိုင်ရာ ဘိုတဲကြီးပေါ်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးပါ။ ၇ရက်ပြည့်လျှင် ထွေးတို့ ဤပုသိမ်မြို့လေးမှ ပြန်ကြရတော့မည်။
တစ်ညနေစောင်း ရုံးမဆင်းမီ ထွေးတို့ ခြံဝင်းကြီးထဲ လမ်းလျှောက်နေကြချိန်။ ဘိုတဲကြီး၏ နောက်ဖေးပြူတင်းပေါက်မှ ခန်းဆီးစသည် လေအလာတွင် ခပ်လွင့်လွင့်မျောကာ ထိုခန်းဆီးနောက်ကွယ်၌ ဆံပင်ရှည်ကြီးများကို ရှင်းလင်းဖီးသင်နေသော မိန်းမတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ကြရလေသည်။ ထွေးနှင့် နေခြည်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ကာ အဓိပွါယ်ပါပါ မဲ့လိုက်မိကြသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှဖြစ်သော်လည်း မှတ်မိလွယ်သော ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါ၏။ ထိုမိန်းမနဖူးတည့်တည့်မှာ ထင်ရှားသောမှဲ့နက်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီး စွတ်စွတ်ဖြူသော အသားအရည်ပေါ်တွင် နှုတ်ခမ်းများက ဆွေးညို့နေအောင် ရဲရဲနီလျှက်ရှိသည်။
ဆွေ့ဖေဖေဟာ ဇနီးဆုံးပြီးနောက် သားသမီးတွေကို ဖခင်မေတ္တာအပြည့်ပေးကာ ပြုစု စောင့်ရှောက်နေသူပါဆိုတာ ဒါလား။ ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ မကရင်မတို့က ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရတာလဲ၊ ဦးဦးကို အဲဒီမိန်းမက ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး ပြုစုတာတွေ မလုပ်ဘူးလား။ အေးလေ တရားဝင်မဟုတ်လို့နေမှာပေါ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ သနားစရာမုဆိုးဖိုပေါ့လေ...။ တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာပင် ဆွေသာသိရင် စိတ်ကောင်းရှာမှာ မဟုတ်ဟု တွေးမိရသည်။ ဆွေက သူ့အဖေကို အတော်လေး ချစ်တဲ့သူ၊ အဖေအကြောင်း တဖွဖွပြောကာ "အဖေနဲ့တူတဲ့ ယောက်ျားရမှပဲ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားမယ်ဟေ့" ဟု ကြွေးကြော်ထားသူ။ ခုတော့....။
"ဒါကြောင့်လည်း ဘိုတဲကြီးဆီကို မမထွေးတို့ကို အလည်မခေါ်တာ ဖြစ်မှာ" နေခြည့်ကို ပြောတော့ နေခြည်ကလည်း သဘောတူစွာ "ဟုတ်မှာ မမထွေးရဲ့" ဟု ဆိုသည်။ "ဘာဖြစ်ဖြစ် အဲဒီကိစ္စကို နေခြည်တို့ အမိဖမ်းမယ်၊ မပြန်ခင် ဘိုတဲကြီးပေါ်သွားပြီးကို လက်မိလက်ရ ဖမ်းရမယ်"ဟု ဆားပုလင်းစတိုင်နှင့် နေခြည်က ပြောလာတော့ ထွေးမှာ သဘောကျစွာ ရယ်ရသေးတော့သည်။
မနက်ဖြန်ဆို ထွေးတို့ ပြန်တော့မည်။ စာမူအတွက် အကြမ်းမှတ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေးတွေလည်း စုံသလောက် ရှိပြီ။ မောင့်ခြေရာတွေ အိပ်မက်ဟောင်းတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့သော ပုသိမ်မြို့လေးကိုလာရတာ ထွေး ကြေနပ်လှပါသည်။ အရေးကြီးဆုံး ထွေးရဲ့ စိတ်၊ ထွေးရဲ့ နှလုံးသား...။ ဒါတွေကို ထွေး ဖမ်းဆုတ်မိခဲ့ပြီ။
ညကျရင်တော့ ဦးဦးရှိရာ ဘိုတဲကြီးဆီ သွားမည်။ တစ်လုတ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူးဆိုတော့ ဦးဦး ကျွေးမွေးထား တာ၊ နေရာထိုင်ခင်းပေးထားတာတွေအတွက် ထွေးတို့ မပြန်ခင် သွားကန်တော့ချင်သေးသည်။ သူ့ဟာသူ နောက်မိန်းမ ယူထားတာကတော့ သူ့အပိုင်းပေါ့လေ၊ ဆွေ့ကိုသာ ဘယ်လိုပြောရမည် မသိ၊ ဦးဦးကိစ္စကို ဖုံးကွယ်ထားရကောင်းနိူး၊ အသိပေးလိုက်ရကောင်းနိူးနှင့် မဝေခွဲနိူင်။ ထွေး စိတ်ထဲ မတင်မကျ ရှိနေရသည်။
ညစာ စားအပြီး ၇နာရီလောက်မှာ ထွေးတို့ ဦးဦးရှိရာ ဘိုတဲကြီးဆီ သွားခဲ့ကြသည်။ မနက်ကတည်းက လာမည် ပြောထားတာမို့ ဦးဦး ကြိုတင် စောင့်နေပေလိမ့်မည်။
ဘိုတဲကြီးထဲ ထွေးတို့ ရောက်မှ အံ့သြသွားရတာက ဘိုတဲကြီးမှာ တစ်ထပ်မဟုတ်၊ တစ်ထပ်ခွဲ ပြောရမလား၊ အပေါ်မှာ အထပ်ခိုးလေး ပါသေးသည်။ အပေါ်ကိုတက်သော လှေကားလေး ရှိသေးသည်။ အတွင်းမှာ မီးလုံးက ၀ါကျင်ကျင်မို့ ဘာကိုပဲ ကြည့်ကြည့် ရုပ်ရှင်ကားဟောင်းတစ်ကားကို ကြည့်နေရသလို ပြက်ပြက်ထင်ထင် မရှိလှ။ အင်မတန်နည်းပါးသော ပရိဘောဂ များကြောင့် ဧည့်ခန်းကြီးမှာ ပိုကျယ်နေသလို ထင်ရသည်။
ဦးဦးက “ဒါက ရွှေမြင်းပျံပုသိမ်ဟာလ၀ါ သမီးတို့ဖို့၊ မိဆွေကိုလည်း ဒီဟာလ၀ါဘူးတွေနဲ့ စာလေးတစ်စောင် ပေးလိုက်ချင်သေးတယ် ခဏလေး” ဟုဆိုကာ ထပ်ခိုးလေးပေါ် တက်သွားသည်။ ဦးဦးတက်သွားရာ လှေကားနောက်ကို လိုက်ကြည့်မိသော ထွေးမျက်လုံးများက တစ်နေရာအရောက်မှာ ရပ်တန့်လျှက် မင်သက်နေမိတော့သည်။
ဘေးကနေခြည့်ကို လက်ကုတ်ကာ ပြလိုက်တော့ နေခြည့်မျက်နှာလေးမှာ သွေးဆုတ်သလို ဖြူဖျော့ သွားတာများ သနား စဖွယ်။ ထွေးရော နေခြည်ပါ တတ်နိူင်လျှင် ဒီဘိုတဲကြီးပေါ်ကနေ အပြေးထွက်သွားချင်လှပြီ။ ဒူးချင်း တစ်ဒုတ်ဒုတ် ရိုက်ကာ ခွေလဲမတတ်ဖြစ်ကြ၍ ထိုင်နေရတာကပင် နောက်ကျော မလုံချင်တော့။ နေခြည်ကလေးမှာ ကြောက်လွန်း၍ အသံတွေပင် တုန်လာလေသည်။ ဦးဦးအပေါ်ထားမိသော သံသယအတွက် စိတ်ထဲက တောင်းပန်နေမိသည်။ ဘ၀ချင်းခြားပြီးတာတောင် ချစ်စိတ်နှင့် မနှင်ရက်သော ဦးဦးခမျာ သနားစရာ။
“ဟင့်အင်း ဘိုတဲကြီးပေါ်မှာ သွားမချက်ချင်ပါဘူး၊ ငါ့အိမ်မှာပဲ ချက်ပြုတ်ပြီး ဆရာပြန်လာမှ နေ့တိုင်း သွားပို့ပေးတာပဲ ကောင်းတယ်”
မျက်လုံးလေးပြူးကာ ခေါင်းလေးတစ်ခါခါနဲ့ ဘိုတဲကြီးဆီကြည့်ကာ မကရင်မ ပြောခဲ့ပုံက သူများအိမ်ပေါ်မှာ သွားမချက်ချင်ပါဘူး ဆိုတာထက် အထိတ်တလန့်ဟန်ဆိုတာ ခုမှပဲ ထွေး ရိပ်မိရတော့သည်။
လှေကားရင်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံထဲက မိန်းမ။ ဦးဦးလက်မောင်းကို ပိုင်ပိုင်ချိတ်တွဲကာ ဆံပင်တွေကိုနောက်လှန်ပြီး ဆံထုံးပုံ့ပုံ့လေး ထုံးထားတဲ့ မိန်းမ၊ နဖူးမှာ မှဲ့နက်ကြီးတစ်လုံး ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းရဲရဲနဲ့ မိန်းမ၊ ကားအက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဆုံးသွားတာကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ ဦးဦးရဲ့ မိန်းမ၊ အဲဒီမိန်းမဟာ ထွေးတို့ တစ်နေ့က ပြူတင်းပေါက်နောက်နားမှာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ မိန်းမ၊ ထွေးသူငယ်ချင်း မိဆွေရဲ့ အမေ။
ဖျတ်ကနဲ....။ တစ်နေ့ကမိန်းမကို ဖြူစုတ်စုတ်အသားအရည်ပေါ်က နီရဲစွေးညို့နှုတ်ခမ်းတို့အား ထီမထင်ဟန်နှင့် ခပ်ကွေးကွေး မဲ့ကာ တစ်သိမ့်သိမ့် ရယ်မောနေသည်ကို နံရံတွေပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရလေသည်။ ရယ်မောနေရင်းမှ ပုံ့ပုံ့လေးထုံးဖွဲ့ထားသော ဆံပင်ကဆံထိုးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်သော် သူမ၏ ခေါင်းပေါ်မှ မည်းနက်သန်စွမ်းသည့်ဆံနွယ်တို့သည် တကောက်ကွေးထိအောင် အိကနဲ ဖြာကျလေသည်။ အံ့သြစွာကြည့်နေရင်းမှာပင် ထိုဆံပင်များသည် အဖြူရောင်စွတ်စွတ် မွဲခြောက်လျှက်၊ သူမ၏ ၀ိုင်းစက်
လှပသော မျက်လုံးများနှင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော နှာတံမှာ ချိုင့်ခွက်ဝင်ကာ ဟောက်ပက်ပက်သို့၊ ရဲရဲနီစွေးသော နှုတ်ခမ်းများမှာလည်း ဖြူစုတ်ပဲ့ရွဲ့ကာ ရှုံ့အိတ်တစ်လုံးကို ဆွဲရှုံ့ထားသလို တွန့်လိတ်လျှက် ပုံပျက်ပန်းပျက်
အသွင်ပြောင်းလေသည်။ နံရံတွေပေါ်မှ ထွေးရှိရာဆီသို့ ခြေတစ်လှမ်း အတိုးမှာ သူမ၏မျက်နှာသည် ထွေးမျက်နှာရှေ့သို့ ဟုတ်ကနဲအရောက်၊ ထွေးခန္မာကိုယ်လေး ပျော့ကနဲ ခွေကျလေ၏။
မိတ်ဆွေရေးဖော်တွေရဲ့ လက်ရာမွန်တွေကိုပါ ဒီမှာ ဒေါင်းပြီး ဖတ်ရှု့နှိုင်ပါတယ်ရှင်။
မေဇင် Wed Nov 14, 03:26:00 PM GMT+8
အိုး...စိတ်ဝင်စား စရာ..ကြောက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ အမ။
ဒီလို သရဲ အကြောင်းလဲ အမ က ပိုင်သကွာ....
SHWE ZIN U Wed Nov 14, 03:30:00 PM GMT+8
မိုက်စ် အဲဒါဖတ်ချင်လို့ ဒေါင်းနေတာ မရသေးတာ ညီမ ချစ်ကြည်ရေ
အဖြူရောင်နတ်သမီး Wed Nov 14, 07:01:00 PM GMT+8
blackroze Thu Nov 15, 02:15:00 AM GMT+8
mstint Thu Nov 15, 06:17:00 PM GMT+8
မချစ်ကတော့ ဘက်စုံပါပဲလား။ ထိတ်လန့်စရာ ဆောင်းပါးတွေလည်း ရေးတတ်တယ်း)
Cameron Fri Nov 16, 04:42:00 PM GMT+8
very interested story... i like horror.
ရင်ခုန်ရသူ Sat Nov 17, 04:28:00 PM GMT+8
San San Htun Mon Jan 07, 07:48:00 AM GMT+8